द्वन्द्व एमालेले निम्त्याउँदै छ कि महन्थ ठाकुरहरुले ? « Pahilo News
द्वन्द्व एमालेले निम्त्याउँदै छ कि महन्थ ठाकुरहरुले ?
प्रकाशित मिति :5March, 2017 11:11 am
२२ फागुन । पूर्वको काँकडभिट्टाबाट २१ फागुनदेखि सुरु भएको नेकपा (एमाले) का पन्ध्र दिने मेची–महाकाली राष्ट्रिय अभियानमा लाखौंले सहभागिता जनाइरहेका छन् । तर, एमालेको पक्षमा बढ्दो जनलहर देखेपछि अहिले मधेसी मोर्चा पूरै तिल्मिलाउन पुगेको छ र तराई–मधेसमा खासगरी २ नम्बर प्रदेशमा एमालेको अभियानलाई भाँजो हाल्ने प्रयत्नमा मोर्चा जुटेको छ ।
अभियानअन्तर्गत एमालेले तराई मधेसका जुन–जुन स्थानहरुमा कार्यक्रम राखेका छन्, त्यही–त्यही स्थानमा मोर्चाले कार्यक्रम राखेर तनाव निम्त्याउने तयारी थालेका छन् । राजनीतिक संस्कारबाट च्युत हुँदै गएका मधेसी मोर्चाले विक्षिप्त मनोदशा प्रदर्शन गरेर एमालेको कार्यक्रम बिथोल्न थालेको बताइन्छ ।
महन्थहरुमा देखिएको छट्पटी
एमालेले मेची–महाकाली अभियान सुरु गर्ने बित्तिकै मधेसी मोर्चाले एमालेकै कार्यक्रमस्थलमा आफ्नो कार्यक्रम राखेर मुठभेड र तनाव निम्त्याउने तयारी थालिरहेको छ । काठमाडौंमा बसेका महन्थ ठाकुरहरुले आफ्ना कार्यकर्तालाई तराईमा झरेर एमालेको कार्यक्रम बिथोल्न निर्देशन दिएसँगै अहिले मोर्चाले एमालेको कार्यक्रम बिथोल्न हरसम्भव प्रयत्न गरिरहेका छन् ।
सरकारले स्थानीय तहको निर्वाचनको मिति घोषणा गरेपछि पनि तराई मधेसमा खासै आन्दोलन नगरेका मोर्चाले चैतदेखि आन्दोलन गर्ने भन्दै आइरहेको छ । तर, चैतदेखि आन्दोलन गर्ने मनस्थिति बनाएका मोर्चाका कार्यकर्ताहरुलाई किन एमालेकै सभाहरु बिथोल्ने गरी मोर्चाका नेताहरुले उचाल्दैछन् ? यो बुझ्नै नसकिने विषय बनेको छ ।
यसैबीच, तराई मधेस लोकतान्त्रिक पार्टीका अध्यक्ष महन्थ ठाकुरले एमालेले तराईमा कार्यक्रम राखेर द्वन्द्व निम्त्याउन खोजेको बताएका छन् । ठाकुरले एमालेले मेची–महाकाली अभियान प्रारम्भ गरेकै दिन अर्थात् शनिबार यस्तो कुरा बताएका हुन् ।
एमालेले मधेसका कुन कुन स्थानमा कति गते कार्यक्रम राख्ने भनेर महिनौंअघि तय गरेको थियो । तर, मधेसी मोर्चाले एमालेले कार्यक्रम राखेकै स्थानमा कार्यक्रम राखेर बिथोल्न खोजिरहेका छन् । मधेसी मोर्चाले एमालेले रौतहटको गरुढामा कार्यक्रम राखेकै दिन आफ्नो कार्यक्रम तय गरेको छ । एमालेले फागुन २६ गते गरुढा बजारमा कार्यक्रम राखेको छ ।
एमालेको कार्यक्रम भाँड्नै निम्ति र जनसहभागिता कम होस् भनेर २ नम्बर प्रदेश केही जिल्लाहरु बन्दको आव्हान पनि गरेका छन् । राजविराजमा हुने एमालेको सभा बिथोल्न सप्तरी बन्दको घोषणा गरेका छन् भने सिरहाको कार्यक्रमलाई प्रभावित तुल्याउन सो जिल्ला बन्दको घोषणा मोर्चाले गरेको छ । यसैगरी, फागुन २५ गते जनकपुरमा हुने एमालेको सभालाई बिथोल्न त्यही दिन जनकपुर बन्दको घोषणा गरिएको छ ।
तर, एमालेले भने मोर्चाले जतिसुकै अवरोध तुल्याए पनि पूर्वनिर्धारित कार्यक्रम गरेरै छाड्ने अडान लिएको छ । एमाले सचिव योगेश भट्टराईले आफूहरुले छापामार शैलीमा कार्यक्रम नगरेको बताउँदै आफ्ना कार्यक्रमहरुबारे सबैलाई पूर्वजानकारी भएको बताएका छन् ।